tamponade senhliziyo - ubulwelwe lapho inhliziyo zamatshe zasesikhwameni ukuqoqa esiningi uketshezi, elibangela nobunzima ekunciphiseni Atria futhi ventricles. Ngenxa yalokho, kukhona ukwehliswa okuphawulekayo umthamo systolic futhi ngomzuzu. Lwentando yilesi sifo okungukuthi i-ephakeme emaphakathi emithambo yegazi ingcindezi, kanye kudalwa izimo sokuthuthukiswa inhliziyo ukwehluleka.
ukwanda okunjalo kungaba ibhekwe uhlawula ukuphendula okuvikela umzimba, kusukela ngenxa lokhu kugeleza ukuze igazi walondoloza ukuba inhliziyo kuze ingcindezi weqiwe lihambe ngemithambo emikhulu kuqhathaniswa ne ingcindezi ngaphakathi komgodlana pericardial. Enye yezimbangela tamponade inhliziyo is ukopha ku sac pericardial ngenxa yokulimala ku inhliziyo, ngemuva kokuhlaselwa yisifo senhliziyo noma ukudabuka le-aorta ngaphakathi pericardium. Ukuvuvukala eba edema pericardial, okuholela yokuthi zanqwabelana ketshezi inhliziyo. tamponade senhliziyo kungase kumkhathaze ukuthuthukiswa izimila kule pericardium, kodwa lokhu abavamile.
Ziyini izimbangela eziyinhloko zalokhu of tamponade non Kwenhlekelele - uremic, neoplastic futhi pericarditis idiopathic.
tamponade senhliziyo kubonakala izimpawu zokwelashwa ezifana Ukuwohloka kwegazi neuropathy at kwezimo ezihlukahlukene ukushaqeka. Lezi zihlanganisa:
- umfutho ophansi wegazi;
- ekunyamalaleni pheze ephelele ishayela ku imithambo e azungeze umzimba;
- cyanosis kwesikhumba kanye nokuncipha lokushisa yayo;
- ngezinye izikhathi nokulahlekelwa ukwazi ngenxa enganele ukugeleza kwegazi ebuchosheni.
At okusezingeni eliphezulu emaphakathi ingcindezi emithambo yegazi, kwezinye izimo ngokweqile egcwele vein jugular. Ezimweni ngabazeka, lokhu ingcindezi kukalwa nge ipayipi. Kuze kube yimanje, ixhunywe yangaphakathi jugular noma subclavian vein, bese uxhuma nge manometer amanzi. Ngokuvamile, lapho tamponade inhliziyo isilinganiso emaphakathi ingcindezi emithambo yegazi ngenhla 1,96 KPA.
Khomba umuntu senhliziyo tamponade kungenzeka, usebenzisa indlela zokuxilonga njengoba echocardiography.
Uma Ukufunda umlando futhi behlolwa, akunakwenzeka ukuthola imbangela impande. Siza ukucacisa sitholakele izifundo ezifana:
• Ucwaningo sofuba (ukuhlolwa isikhumba, njll).
• Kuphethe ukuhlolwa umchamo wokuthi yadalwa noma uqinisekise syndrome nephrotic futhi ukwehluleka kwezinso.
• Ukulawulwa kwendlala yegilo Screen.
• Ukucinga isimila (ikakhulukazi webele, noma namaphaphu).
tamponade senhliziyo, ukwelashwa
Lapho izimpawu tamponade inhliziyo edingekayo ukususa uketshezi pericardial ngokushesha usebenzisa wokubhoboza noma surgically. ahlinzwe ngokushesha kufanele kwenziwe amanxeba zenhliziyo nokukhula ngokushesha ubovu exudate. Uma ebambe pericardium wokubhoboza kunzima noma uma kwenzeka ukuthi akunjalo akuniké ngcono olulindelekile, ungakwazi akhulule izimpawu isikhathi esifushane ukulungiselela izindleko zokuhlinzwa kwakho. Ngenxa yalesi ebanjwe dextran emthanjeni, noma olunye uketshezi, ukugcwalisa embhedeni semithambo futhi ukwandisa emaphakathi ingcindezi emithambo yegazi.
Alime ekuqongeleleni uketshezi serous ku pericardium ungakwazi, ngokusebenzisa ama. tamponade senhliziyo in iziguli pericarditis, okuyinto ithuthukiswe ngenxa imfiva rheumatism noma esivimba amanzi iphathwa ngempumelelo elashwe hormone aqede wokubhoboza we pericardium.
Ngakho, ngaphandle kokwelashwa esifike tamponade inhliziyo ezimweni eziningi kungase kwenzeke ebulalayo. Udokotela wokuqala ukuthi yini kwaba imbangela isifo, futhi ihlola kobukhulu isimo lesiguli. Uma tamponade inhliziyo lihlotshaniswa izinqubo ukuvuvukala, kungenzeka ukuba kungagcini kuphela izindlela olandelanayo lokwelapheka. Zonke ezinye izimo ezidinga ukuthi kungenelelwe esiphuthumayo kuhlinzwa. Lolu ketshezi ku pericardium is kuzosuswa ethwele pericardiocentesis (puncturing inaliti nenshisekelo nokuqukethwe pericardial) noma ngokususa ingxenye eyayonakele pericardium.
Ukubhodla: izimbangela, izinhlobo, ukukhululwa
Isikhathi Vaz 2106 ukufakwa, ukulungisa, intengo
Ongenhla: isakhiwo, umsebenzi kanye umonakalo kungenzeka
JBL, Ukuzwakala komculo: ukubuyekezwa. JBL Charge 2 Plus. Izikhulumi ephathekayo JBL Xtreme